Yeremia 48 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
48 Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka+ akyerɛ Moab+ ni: “Nebo+ nnue, efisɛ wɔasɛe no! Wɔagu Kiriataim+ anim ase, wɔadi ne so nkonim. Wɔagu abantenten no anim ase, na wɔama ehu aka no.+ 2 Moab ayeyi+ nyinaa asa. Wɔasusuw mmusu bi atia no wɔ Hesbon+ sɛ: ‘Mommra mma yentwa no mfi hɔ na wanyɛ ɔman bio.’+ “Wo, Madmin nso, yɛ komm. Nkrante di w’akyi reba. 3 Wɔte sũ ne ɔsɛe ne obubu kɛse wɔ Horonaim.+ 4 Wɔabubu Moab.+ Ne mma resũ. 5 Wɔde osũ na ɛforo Luhit+ kwan no kɔ—osũ nko ara. Nkurɔfo ate sɛ abubu.+ Enti wosu yayaayaw fi Horonaim kwan so sian ba. 6 “Munguan; munguan nnye mo kra+ na monyɛ sɛ sare so+ ɔpopaw dua. 7 Esiane sɛ wode wo ho ato wo nnwuma ne w’ademude so nti, wo nso wobedi wo so.+ Kemos+ ne n’asɔfo ne ne mpanyimfo nyinaa+ bɛbom akɔ nkoasom mu.+ 8 Ɔsɛefo no bɛba kurow biara so,+ na kurow biara nni hɔ a ebefi mu afi.+ Ɔbɛma asasetaw no afi hɔ na asase a ɛda fam no asɛe sɛnea Yehowa aka no. 9 “Momfa ɔkwan ahyɛnsode mma Moab, efisɛ ɔbɛtetew pasaa na wakɔ.+ Ne nkurow bɛyɛ ahodwiriwde, na obiara rentena mu.+ 10 “Nnome nka nea ɔtoto Yehowa adwuma ase,+ na nnome nka nea ɔkame ne nkrante, mogya ho! 11 “Moabfo atena hɔ dwoodwoo fi wɔn mmofraberem,+ na wɔda wɔn puw so a biribiara nhaw wɔn.+ Wonhwie mfii ade biako mu nguu foforo mu, na wɔnkɔɔ nkoasom mu da. Ɛno nti na ne dɛ da so wɔ mu, na ne hua nsesae no. 12 “‘Enti hwɛ! Nna bi reba,’ Yehowa asɛm ni, ‘na mɛsoma ahwiefo aba wɔn so na wɔabɛkyea wɔn+ ahwie wɔn agu, na wɔabobɔ wɔn nhina akɛse no pasapasa. 13 Moab ani bewu Kemos+ ho sɛnea Israel fie ani awu Betel a ɔde ne ho too so ho no.+ 14 Mone hena a moka sɛ: “Yɛyɛ nnɔmmarima+ ne mmarima ahoɔdenfo a yɛkɔ ɔsa”?’ 15 “‘Wɔasɛe Moab; obi atow ahyɛ ne nkurow so.+ Ne mmerante akantinka nso, wɔasian kɔ owu mu,’+ Ɔhene a ne din de asafo Yehowa no asɛm ni.+ 16 “Moab amanehunu abɛn, na ne mmusu repɛ ntɛm paa.+ 17 Wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa begyam no, wɔn a wonim ne din+ no. Monka sɛ, ‘Ahoɔden poma no na abubu yi, ahoɔfɛ dua no!’+ 18 “Dibon+ babea+ a wote kurow no mu, si fi anuonyam so, na tena sukɔm mu, efisɛ Moab sɛefo no aba wo so. Na wo nkurow a ɛyɛ den no, ɔbɛsɛe no.+ 19 “Gyina hɔ na hwehwɛ ɔkwan, O wo a wote Aroer.+ Bisa ɔbarima a ɔreguan ne ɔbea a ɔrepɛ baabi afa. Bisa sɛ, ‘Asɛm bɛn na asi?’+ 20 Wɔagu Moab anim ase, na ehu aka no.+ Muntwa adwo na munsu. Monka wɔ Arnon+ sɛ wɔasɛe Moab. 21 Atemmu aba asase a ɛda fam no so,+ aba Holon ne Yahas+ ne Mefaat+ so, 22 aba Dibon+ ne Nebo+ ne Bet-Diblataim so, 23 aba Kiriataim+ ne Bet-Gamul ne Bet-Meon+ so, 24 aba Keriot+ ne Bosra+ ne Moab asase so nkurow nyinaa so, nea ɛwɔ akyirikyiri ne nea ɛbɛn nyinaa. 25 “‘Wɔatwa Moab abɛn akyene,+ na wɔabu ne basa+ nso,’ Yehowa asɛm ni. 26 ‘Momma ɔnnom nsã mmow+ efisɛ wama ne ho so atia Yehowa;+ Moab ayantam ne fe mu+ na wadan ade a wodi ho fɛw. 27 “‘Israel anyɛ ade a wodi ho fɛw amma wo anaa?+ Ɔka akorɔmfo ho?+ Bere biara a wobɛkasa atia no no, wowosowosow wo ti. 28 “‘Mo, Moabfo, munnyaw mo nkurow na monkɔtena ɔbotan+ so, na monyɛ sɛ aborɔnoma a ɔyɛ ne berebuw wɔ ntokuru ano kwan nkyɛn.’”+ 29 “Yɛate sɛnea Moab ahoman no+—ɔyɛ dwae paa—yɛate n’ahomaso ne n’ahantan ne n’ahokyerɛ ne ne koma a wama so no.”+ 30 “‘M’ankasa minim n’abufuw,’ Yehowa asɛm ni, ‘na ɛrenkosi baabiara; ne kasa hunu no+—ɔrentumi nyɛ hwee.+ 31 Ɛno nti na metwa adwo wɔ Moab ho, na masu Moabfo nyinaa no.+ Nnipa bedi Kir-Heres+ mmarima ho abooboo. 32 “‘O Sibma+ bobe, mesu wo asen Yaser+ ho su no. Wo duforo fɛfɛ atra po. Atra po akodu Yaser.+ Ɔsɛefo no atow ahyɛ w’ahohuru bere mu nnuaba+ ne wo bobe a woatetew so.+ 33 Wɔayi ahurusi ne ahosɛpɛw afi turo no mu ne Moab asase so kɔ.+ Mama nsã atwa wɔ nsã-kyi-amoa mu.+ Obiara remmɔ nnye so bere a wɔrekyĩ nsã. Sɛ wɔbɔ gye so mpo a, ɛrenyɛ nnyeso pa.’”+ 34 “‘Wɔama wɔn nne so. Wɔate Hesbon+ nteɛm no wɔ Eleale+ akodu Yahas.+ Wɔate Soar+ nteɛm+ wɔ Horonaim+ ne Eglat-Selisiya.+ Nimrim+ asu mpo bɛyera. 35 Na mɛma afɔrebɔde a wɔde ba sorɔnsorɔmmea ne afɔrebɔde a wɔhyew ma wɔn anyame no agyae wɔ Moab,’+ Yehowa asɛm ni. 36 ‘Ɛno nti me koma begyigye sɛ mmɛn ama Moab.+ Kir-Heres+ mmarima nso, me koma begyigye sɛ mmɛn ama wɔn. Ɛno nti na nneɛma bebrebe a wanya no bɛsɛe no.+ 37 Obiara ti so apa+ na wɔatwitwa wɔn bogyesɛ.+ Wɔatwitwa obiara nsa ho akam,+ na atweaatam+ bɔ obiara mu!’” 38 “‘Wɔte agyaadwotwa wɔ Moab adan atifi nyinaa ne ne mmɔnten so baabiara,+ efisɛ mabubu Moab sɛ anwenne bi a wɔmpɛ,’+ Yehowa asɛm ni. 39 ‘O monhwɛ sɛnea ehu aka no! Muntwa adwo! Monhwɛ sɛnea Moab aguan! Animguase aka no.+ Moab adan ade a wodi ho fɛw ne ahude ama wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa.’” 40 “Nea Yehowa aka ni, ‘Hwɛ! Sɛnea ɔkɔre tow hyɛ aboa bi so no,+ saa na obi bɛtrɛw ne ntaban mu aba Moab so.+ 41 Wobedi ne nkurow so, na wɔagye n’abannennen no. Na da no, Moab nnɔmmarima koma bɛyɛ sɛ ɔbea a ɔwɔ awoko yaw mu koma.’”+ 42 “‘Wɔbɛsɛe Moab na anyɛ ɔman bio,+ efisɛ wama ne ho so atia Yehowa.+ 43 O Moabfo, akomatu ne amoa ne afiri da mo so,’+ Yehowa asɛm ni. 44 ‘Obiara a akomatu no nti obeguan no bɛtɔ amoa mu, na obiara a obefi amoa no mu afi no, afiri no beyi no.’+ “‘Mede bɛba Moab so, n’akontaabu afe no,’+ Yehowa asɛm ni. 45 ‘Aguanfo no akogyinagyina Hesbon nwini mu a ahoɔden bi nni wɔn mu. Na ogya befi Hesbon aba+ na ogyaframa afi Sihon+ abɛhyew Moab asontɔrem na ahyew hooyɛ mma no mpampam.’+ 46 “‘Moab due!+ Kemos+ ho nnipa asɛe. Efisɛ wɔafa wo mmabarima nnommum, na wo mmabea nso, wɔafa wɔn nnommum. 47 Na awiei nna no mu no, mɛboaboa Moab atukɔfo ano,’+ Yehowa asɛm ni. ‘Moab ho atemmusɛm no si wɔ ha.’”+